Fisorohana valanaretina :: Hametraka paikady vaovao eto an-drenivohitra ny Tafika • AoRaha
Hanova paikady eto andrenivohitra ny Tafika, manomboka anio, ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina Covid19. Hisy ny fitetezana an’ireo toby miaramila rehetra eto an-drenivohitra amin’ny fanomezana an’ireo toromarika mifandraika amin’izany, ary hotarihin’ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny jeneraly Rabenaivoarivelo JeanClaude, lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika. Tanjona ny hanamafisana ny fepetra mba hampitsaharana an’izao fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid19 eto Antananarivo izao.
Isan’ireo nanampy betsaka ny fifehezana ny valanaretina, tany Toamasina ny Tafika malagasy, na dia teo aza ireo fanarabiana sy fikasana fanoherana nataona andian’olona sasany. Nandray anjara tamin’ny fitsaboana maimaimpoana an’ireo mponina ny miaramila sady mpitsabo marobe. Manohy hatrany ny hetsika any amin’ny faritra Atsinanana, indrindra ao Toamasina, ny ekipan’ny Tafika, hatramin’ny omaly.
Tao anatin’ny andraikitra niantsorohan’ireo miaramila ihany koa ny fanomezana fanampiana amin’ny fampitaovana, toy ny aron-tava. Ankoatra izay ny fifehezana an’ireo olona tamin’ny fanajàna ny fepetra ara-pahasalamana, toy ny fanaraha-maso ny ora fivoahana ny trano sy ny ora fahazoana mivezivezy. Nahitam-bokany izany satria raha ny tarehimarika dia mihena tokoa ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’ aretin’ny Covid-19, tany Toamasina, tato anatin’ny andro vitsy izao.
Niverina nandimby an’i Toamasina ho foiben’ny valanaretina indray ny eto Antananarivo, izay nahitana ny fandikàna an’ireo fepetra samihafa, tahaka ny fanaovana zinona ny fitondrana ny arontava, ary fihoaram-pefy amin’ ireo fihetsika miteraka fitangoronana ka isan’ny mampihanaka ny Covid-19. Saika tsy latsaky ny dimampolo isan’andro ny marary vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina teto Antananarivo.
Fiatrehana ny valanaretina :: Nanomana vola fiandry 1 000 miliara ariary ny fanjakana
Fanampiana ny sahirana :: Sivanina ireo olona hisitraka ny Kaly tsinjo